Intel Dayz Hack Hack Ukukopa, iAimbot, i-ESP, iWallhack- iGamepron
Intel DayZ kugula
Nantoni na enokwenzeka xa unayo iDayZ Intel yethu yokuThembela!
Thatha isixhobo sovavanyo lokuqhuba kwaye uya kuthandana. Thenga imveliso yeentsuku ezi-1 namhlanje!
Okwangoku awuzinikelanga, okwangoku awukulungelanga ukunika ukufikelela okwangoku? Zithengele imveliso yeeveki ezili-1 namhlanje!
Ngamalungu azinikeleyo kakhulu eGamepron aya kuyidinga le nto. Thenga isitshixo semveliso yenyanga e-1 namhlanje!
Nokuba yinjongo yakho okanye indawo ekuyo iintshaba, ungasebenzisa iDayZ Intel Hack yethu ukufumana ithuba kuyo nayiphi na imeko. Kuhlala kulungile ukufunda ngakumbi malunga nokukungqongileyo, njengoko oko kuya kukunceda uphumelele.
Ulwazi lwe-DayZ Intel yoLwazi
I-DayZ iya kukuphosa embindini we-apocalypse ye-zombie, kwaye kuye kumdlali ukufumana ukuba makenze ntoni. Abanye abantu baya kudibana nabanye kwaye bakhe iziseko, ngelixa abanye baya kuhlala bebodwa, into ekufuneka uyikhumbule kukuba wonke umntu unenjongo enye, kwaye loo njongo kukusinda! Sebenzisa i-DayZ Intel ukukhangela akuyi kukuvumela kuphela ukuba uphile ixesha elide, kodwa unokugcina isitayile sokudlala esinoburharha kwaye ube nempumelelo. Abantu bathambekele ekubeni balumke xa bedlala iDayZ, kodwa ungakhathazeki kwakhona!
I-hack yethu ye-DayZ Intel ineempawu ezimangalisayo ze-Aimbot, i-ESP / iWallhack, kunye nezinye izinto eziza kunceda ukuhamba ngokulula kwiapocalypse. Uyakufumana amanqaku anjengeCompass, ukuSusa, iiModyuli zeMozulu, i-DLC Unlockers, kunye nezinye izinto eziza kwenza umdlalo ube mnandi ngakumbi (kwaye kube lula ukuwina!)
Utshaba ESP (iibhokisi)
Ulwazi lotshaba (iZombi, izilwanyana, idolophu)
Umbono womntu wesithathu
Malunga ne-DayZ Intel
I-DayZ Intel igqibelele kuye nawuphina umntu osebenzisa i-Intel esekwe kwi-CPU, ngakumbi xa ucinga nge "Indlela yokubulala" efumaneka kuphela. Ukuphulukana nemipu ayisiyonto inokukhetha kuyo le DayZ Hack yenziwe ukuba isebenze, yiyo loo nto iba yindlela yethu # 1! Ungalutshintsha useto lwe-DayZ aimbot ukuya kuthi ga apho luya kuthi tsiba khona iZombi ngokupheleleyo, kugxilwe kuphela kubadlali abangabantu abenza isoyikiso. Ifumaneka ngesiNgesi, le mveliso iza kuza neHWID Spoofer ifakiwe. Abo banesixhobo se-ID esivaliweyo esidlulileyo banokuvuya! Unengqeshiso entsha kubomi bakho beDayZ.
Kutheni usebenzisa iDayZ Intel ngaphezulu kwabanye ababoneleli?
I-Gamepron ngoyena mnikezeli ubalaseleyo we-DayZ hacks kwi-intanethi, kwaye ungabuza nabaphi na abasebenzisi bethu malunga nelo bango. Uninzi lwabantu abathenga iihacks bebesenza oko okwethutyana, kwaye kwimithombo eyahlukeneyo eyahlukeneyo, ekhokelela ekubeni badane ixesha elininzi. Ngokumalunga nokuphononongwa, bonke abathengi bethu abananto ngaphandle kwezinto ezintle abanokuzithetha malunga nenkonzo kunye nezixhobo, kutheni ke uzikhathaza ngokujonga kwenye indawo? Thenga umkhondo we-DayZ oya kukunceda ngokugqwesileyo, ngokuchasene nokusebenza ithutyana ngaphambi kokuba uvinjelwe. Kukho isizathu sokuba sibe # 1 kwi-intanethi!
Lungisa useto lomnqweno we-DayZ ukuze ulungele iimfuno zakho ngokugqibeleleyo usebenzisa i-DayZ Intel ukukopela. Kutheni le nto ungahlala useto lwefektri nasiphi na isixhobo? I-Gamepron ibeka amandla entendeni yesandla sakho ngokukuvumela ukuba uthathe isigqibo sokuba zeziphi izinto ezisebenzayo, kunye nendlela abaza kusebenza ngayo. Lungisa ubungakanani besangqa sakho se-FOV ngaphakathi kwe-DayZ aimbot, okanye ulawule umbala kuseto lwakho lwe-ESP-ukhetho lwendlela yokwenza ngokwezifiso lubonakala ngathi alunakuphela xa ukhohlisa nge-DayZ Intel. Khohlwa malunga nokuzama ukuphucula izakhono zakho zokudlala ngendlela yesiko kwaye ufumane nenkqubo!
Nokuba uyi-novice xa kuziwa kwi-hacks ungazuza kwizixhobo zethu. Zonke zilula kwaye zichanekile, zinika nokuba lelona qhekeza "liluhlaza" ithuba lokulwa kwi-intanethi! Singumboneleli # 1 weeDay Hacks ngesizathu.
Ukulungele ukuphumelela ngaphezulu? Thenga imveliso yakho namhlanje!
Ilindelwe Lawula kunye ne-DayZ Intel Hack yethu?